NYI LYNN SECK 18+ DEN: April 2008
Posted by NLS at 4/30/2008 02:27:00 PM 1 comment Links to this post
ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ ရိုက်လိုက်တိုင်း စိတ်တိုင်းကျတဲ့ ပုံကောင်းတွေ ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆိုလည်း ကျွန်တှော ရိုက်လာတာ ပုံပေါင်း ထောင်ကျှော ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်း စိတ်တိုင်းကျတဲ့ ပုံက ၁ဝဝတောင် မရှိပါဘူး။ ကျွန်တှောက ဓာတ်ပုံပညာရှင် စစ်စစ်လည်း မဟုတ်လေတော့ တချို့ပုံတွေက အလင်းအမှောင် မညီမျှတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Graphic Art နဲ့ အရောင်တွေရဲ့အားကို နှစ်သက်သူမို့ ပုံတှောတှောများများကို Photo Editing လုပ်ရတာကို ကြိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့ ဓာတ်ပုံသမား မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရင်လည်း ခံနိုင်ပါတယ်။ အပှေါဆုံးက ဓမဿမရံကြီး ပုံဆိုရင် မူရင်းပုံက တှောတှောကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော စိတ်တိုင်းမကျဘူး။ Ideology လေးတစ်ခု ကျွန်တှော ထပ်ထည့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် Effect တချို့သုံးပြီး ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီပုံလေးကို The Earthquake at Pagan ဆိုတဲ့ နာမည်လေး ပေးလိုက်ပြီး ဆာရီရယ်လ် ပုံအဖြစ် အသွင်းပြောင်းလိုက်တယ်။ မူရင်းပုံထက် ဒီပုံကို ပိုသဘောကျမိတယ်။ ဒီပုံတွေကို စီးပွားရေး မပါတဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို သုံးလို့ရပါတယ်။
Posted by NLS at 4/27/2008 06:37:00 PM 1 comment Links to this post
Download Here : 6Mb
ပလန်းနတ် သကြဿငန်ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အချိန်တှောတှော ပေးခဲ့ရတယ်။ မှောဒယ်တွေ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ရိုက်ပြီးသား ပုံတွေကို ပြင်သင့်တာပြင်၊ နှေးလွန်းတဲ့ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ အပ်လုဒ်လုပ်ရ၊ အချက်အလက်နဲ့ စာတွေ စုဆောင်းရ၊ ကြှောငြာတွေ ရှာဖွေရ၊ Celebrities တွေနဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ရ စတာတွေနဲ့ တှောတှော မလွယ်ပါဘူး။ တစ်ရက်ကို ပုံမှန် လူဦးရေ ၃ဝဝဝကျှော၊ အလည်အပတ်အကြိမ် အရေအတွက် ၃ဝဝဝဝကျှော ရှိတဲ့ ဒီလိုဆိုဒ်မှာ ကြှောငြာဖို့ကိုလည်း စီးပွားရေး သမားတွေက အင်တာနက်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို သိပ်မမြင် ကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့အားလုံး ကြိုးစားပြီး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပှေါက ဖိုင်လေးကတော့ ပလန်းနတ်မှာ သကြဿငန်အတွက် ဖက်ရှင် ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတဲ့ မှောဒယ်တွေ ပုံထဲက အကောင်းဆုံး ပုံလေးတွေကို ပြင်ဆင်ပြီး အမှတ်တရ ဖက်ရှင် အီးဘွခ် အနေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ www.planet.com.mm/thingyan.cfm ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ကူးယူလို့ ရပါတယ်။ ၂၀၀၈ မြန်မာသကြဿငန်ကာလက ရန်ကုန် မနဿတလေးမှာ မြင်ရတဲ့ သကြဿငန် မြင်ကွင်းတွေကိုလည်း ခံစားဖို့ ပလန်းနတ်သကြဿငန် ကနေ ဖိတ်ခှေါလိုက်ပါတယ်။
Posted by NLS at 4/23/2008 07:08:00 PM0comments Links to this post
Labels: Design, PDF, Website
Posted by NLS at 4/22/2008 08:07:00 PM0comments Links to this post
ညောင်ဦးကနေ ရန်ကုန်ခရီးလမ်းမှာ အဓိက မြို့တွေဖြစ်တဲ့ ညောင်ဦး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ရေနံချောင်း၊ မကွေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ အောင်လံ၊ ပြည်၊ ပေါင်းတည်၊ နတ်တလင်း၊ ကြို့ပင်ကောက်၊ လက်ပံတန်း၊ သာယာဝတီ၊ သုံးဆယ်၊ ဥကဿကံ၊ တိုက်ကြီး၊ မှောဘီ စတဲ့မြို့တွေကို ဖြတ်သန်းလို့ သွားပါတယ်။ ညောင်ဦးနဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်း အသွားမှာ ပုပဿပါးတောင်ကြီးကို လှမ်းမြင်လို့ နေရတယ်။ ပုပဿပါးဒေသ တဝိုက်ကတော့ စိမ်းလန်း စိုပြေရေး အစီအစဉ်တွေကြောင့် သစ်ပင်ကြီးငယ်တွေနဲ့ သဲကနဿတာရထဲက အိုအေစစ်လို အပူအတှောလေး သက်သာပါတယ်။ ပုပဿပါးတောင်ဟာ အမြင့်ပေ ၄၉၈၁ပေ ရှိပါသတဲ့။ ပုပဿပါးကို တချို့က ပါဠိစကား ပုပဿဖ ကနေ ဆင်းသက်လာတာလို့ ယူဆကြတယ်။ ပန်းတောင် လို့ အနက်ရပါတယ်။ တချို့က ပုဗဿဗတောင် အရှေ့အရပ်ကတောင်လို့ လို့ဆိုကြသတဲ့။ ပုဂံပြည် ယုန်လွှတ်ကျွန်းရဲ့ အရှေ့အရပ်မှာ ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါသတဲ့။ တချို့ကတော့ ပါးပုတ်တောင် ကနေ ပြောင်းလဲလာတာလို့ ပြောကြတယ်။ မူတွေ ဘယ်လိုပဲကွဲကွဲ အခုခေတ် လူတွေစိတ်မှာတော ပုပဿပါးနတ်တောင် အခေါင်မြင့်ဖျား စုံတောပြား၌ ဆိုတဲ့ ရှေးခေတ်ပုဂံပြည်က ကဗျာလေးအတိုင်း ပုပဿပါးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့နတ်တောင်၊ ဂမဿဘီရ နယ်မြေဆိုပြီး သတ်မှတ်နေကြပါပြီ။ ဂေါတမဘုရားရှင်က သူပရိနိဗဿဗာန် စံဝင်တှောမူပြီး ၁၀၁နှစ်ရောက်ရင် ပုပဿပါးတောင် မြေမှစုန့်စုန့် ပှေါလတဿတံ့လို့ ဗျာဒိတ်တှော ဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီး လူတွေက ယူမှတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်း ပထဝီပညာရှင်တွေ အလိုကတော့ ဒီမီးတောင်ကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅သန်း မိုင်အိုဆင်းယုဂ် နောက်ပိုင်းမှာကတည်းက ရှိနေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမီးတောင်ကြီး ဆက်မပေါက်ကွဲတော့ပဲ သေသွားခဲ့တာကမှ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျှောလောက်က ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တှောငယ်ငယ်က ဒီတောင်မကြီးသာမက အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်က တောင်တွေကိုလည်း တက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကတွတ်သီးတွေ အလွန်ပေါများတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။ တောင်ကလပ်မှာ မျောက်တွေပေါသလောက် တောင်မကြီးမှာတော့ မျောက်တွေကို မတွေ့ရဘူး။ အဲဒီတုန်းက မီးတောင်ဝ ချိုင့်ခွက်ကြီးက တကယ့်ကို ပီဘိ တောနက်ကြီး တစ်ခုလိုပါပဲ။ တောဝက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဟိုးရှေးတုန်းက တောင်ကလပ်မှာ အခုလို ဇောင်းတန်းတွေ၊ လှေကားတွေ မရှိပါဘူးတဲ့။ အပှေါတက်ချင်သူတွေဟာ အသက်ရှိတယ်လို့ ယူဆကြတဲ့ နွယ်ငန်းကြီးတွေ ရေသောက်ဆင်းချိန်ကို စောင့်စားပြီး သူတို့ ပြန်အတက်မှာမှ တခါတည်း တွဲခိုရင်း လိုက်တက်ကြရပါသတဲ့။ ဒီပုပဿပါးဒေသနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒဏဿဍာရီတွေ ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း အလျံအပယ်ပါပဲ။ မင်းမဟာဂီရိဇာတ်လမ်း၊ စဏဿဍမုခိ ဘီလူးမ ဇာတ်လမ်းတို့ကတော့ နာမည်ကျှောပေါ့။ အရှင်ကဝိနဿဒရဲ့ ပုပဿပါးတောင်တှော သမိုင်းမှာ ထူးခြားတာ တစ်ခုကို တွေ့ရတာက “သိုးကလေ” အစချီတဲ့ ပုပဿပါးနတ်တောင် ကဗျာကို ဖွဲ့ဆိုသူဟာ မောင်တင့်တယ်ရဲ့ နှမတှော မမြတ်လှရဲ့ ငယ်ရည်းစား ဖြစ်ပါသတဲ့။ သိုးကလေ မဟုတ်ဘဲ သိုးကလေးလို့ တွေ့ရပါတယ်။ သိုးကလေး ဆိုတာ နတ်မိဖုရားငယ်ကို ခှေါဝှေါတဲ့ ရှေးအမည်ပါ။ သိုးဆိုတာက အဝတ်တန်ဆာ ပျော့ခမောက်ကို အချွန်တပ်ပြီး အနားလေးဘက် အထက်ကိုလှန်ထားတဲ့ လေးထောင့်စပ်စပ် ခမောက်ကို ခှေါတာ ဖြစ်ပါသတဲ့။ ၎င်းမှာ နားရွက်အုပ် ပါရှိပါတယ်။ ဒီလို ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားတဲ့ နတ်မိဖုရားလေးလို့ အဓိပဿပာယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာတွေက အနောက်တိုင်းသားတွေကို သိုးဆောင်းလူမျိုးလို့ ခှေါဝှေါတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ညောင်ဦးကနေ ကျောက်ပန်းတောင်း ခရီးလမ်းဟာ မဆိုးလှဘူးလို့ ပြောရပါမယ်။ လမ်းတွေက မကျယ်ပေမယ့် အဆိုးကြီး မဟုတ်သေးဘူး။ ပုပဿပါးတောင်မှာ မိုးညို့ရင် မြင်းတောင် ပြေးမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့၊ ဒေါင်းတောင် ပျံချိန်မရလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ သဲချောင်းတွေကိုလည်း ဖြတ်သန်းရပါသေးတယ်။ ဒီချောင်းတွေကို ဖြတ်တော့ သုံးဆယ့်ခုနှစ်မင်း နတ်တွေထဲက ယမားသဲချောင်းကို မြင်းနဲ့ အပြင်းဖြတ်တဲ့အခိုက် ချောင်းရေက မြင်းရဲ့ နောက်ခြေကိုရိုက်ပြီး နတ်ဖြစ်သွားတဲ့ ယမားမြင်းဖြူရှင် နတ်အကြောင်းလည်း တွေးမိနေပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်က မြင်းဆိုတာမျိုးက သဲထဲပြေးတဲ့ အမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ခွာအနေအထားကြောင့်လည်း သဲထဲမှာ မြန်မြန်ပြေးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သဲချောင်းမှာ ဘယ်လောက်ပဲ မြင်းကို အပြင်းနှင်နှင် မြင်းက ထင်သလောက် ဒုန်းစိုင်းနိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရေလွတ်အောင် မပြေးနိုင်တာလို့ ထင်မိတယ်။ ထားတော့။
ကျောက်ပန်းတောင်း ကျှောလာတာနဲ့ ရေနံချောင်း လမ်းအပိုင်းဟာ အတှောဆိုးရွားလာပါပြီ။ ဒီလမ်းခရီးကို ကျွန်တှော မရောက်တာ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ရှိပြီ။ အရင်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ပိုဆိုးလာတာပဲ ရှိတယ်။ အပူချိန်ကလည်း တှောတှောပြင်းတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃ဝကျှောမှာ အဲဒီနေ့က အပူချိန်ဟာ ၄ဂနဲ့ စံချိန်တင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ပူလွန်းအားကြီးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ထဲကနေ အပူငွေ့တွေ တရိပ်ရိပ် ထွက်နေတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်။ ကျွန်တှောတို့ စီးလာတဲ့ကားက ရဲသူအောင်။ စုတ်လိုက်တာလည်း ချာလို့။ သူတို့ကတော့ အဲယားကွန်း မနိုင်တာလို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကတော့ အဲယားကွန်းကို အပြည့်မပေးတာပါ။ ကျွန်တှောဟာ တှောတှောလေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမိတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ပေးထားရတာက ပုံမှန်ထက် ၂ဆလောက်များတဲ့ ကားခကို ပေးစီးနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြန်ရတဲ့ Service က ဝတ်ကျေတန်းကျေတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဒီကလူတွေဟာ Service ဆိုတာကို နားမလည်ကြသေးဘူး။ ခရီးသည် ၅ဝကျှော ဘယ်လိုဒုကဿခရောက်နေတယ် သူတို့ ဂရုမထားဘူး။ ဓာတ်ဆီ အကုန်အကျ သက်သာအောင် သူတို့ အမြတ်များများ ထွက်အောင်ပဲ ရှေးရှုနေကြတယ်။ ကားပှေါမှာက နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာပြည်ကို သိကဿခာကျစေတယ် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ တွေးမိပုံမရဘူး။ ခရီးသည်တွေကလည်း အားနာလို့လား၊ ကြောက်လို့လား၊ ဒီအပူဒဏ်ကိုပဲ ရိုးနေလို့လား ဘာလို့မှန်းကို မသိဘူး။ တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့သာ ပူတဲ့အကြောင်း ပြောနေတယ်၊ ဘယ်သူကမှ တုတ်တုတ် မလှုပ်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ ကျွန်တှောကပဲ အဲယားကွန်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖွင့်ပေးရင် ဖွင့်ပေး မဖွင့်ပေးရင်လည်း ကားမှန်တံခါးတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ လူမုန်းခံ ပြောရတော့တယ်။ ဘယ်ဟာလုပ်ပေးတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ကားမှန်တံခါးတွေ ဖွင့်လိုက်ပြီး အဲယားကွန်းကို ပိတ်လိုက်တယ်ဗျား။ ကျွန်တှောလည်း စိတ်ကို အဆုံးစွန်းအထိ လေသွားတယ်။ ဘာမှ ပြောချင်စိတ်လည်း မရှိတော့လို့ နွေလေပူ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ကို ခံစားရင်း လိုက်လာခဲ့ရတယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်တှောဟာ ထိုက်တန်တဲ့ ကြေးထက်ပေးပြီး စီးလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြန်ရတဲ့ ရလာဒ်ကတော့ စုတ်ပြတ်ထွက်နေတာပဲ။
ရေနံချောင်းနဲ့ မကွေးကြားမှာတော့ ဝက်မစွတ်ကို ဖြတ်လာရတယ်။ ဝက်မစွတ် နဝဒေးတို့၊ ယောမင်းကြီးတို့၊ ဝက်မစွတ် ဝန်ထောက်မင်းတို့ကို သတိရနေမိတယ်။ အဝေးပြေးကားဟာ စုတ်ချာလွန်းတဲ့လမ်းကြောင့် လှုပ်လီလှုပ်လဲ့သာ မောင်းနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေဟာ ကားအကောင်းစားတွေ စီးနေရတာကြောင့် ဖင်ဇိမ်ကျပြီး မသိဘဲ နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလမ်းတွေကို မသုံးဘဲ လေကြောင်းခရီးနဲ့ သွားနေကြလို့ ဒီလို လမ်းတွေ ဒီလောက် ဆိုးနေတာကို မသိကြတာလား၊ တမင်သက်သက်ကို မပြင်တာလား ဆိုတာကို ကျွန်တှော တွေးလို့ မရဘူး။ မကွေးရဲ့ ဧရာဝတီမြစ် တဖက်ကမ်းမှာ မင်းဘူးတို့ စလင်းတို့ ရှိတယ်။ မင်းဘူးမှာ ရွှံ့မီးတောင်တွေ၊ နဂါးပွက်အိုင်တွေ ရှိသတဲ့။ ကျွန်တှော တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးပါဘူး။ တကောင်းကနေ စူဠာသမဿဘဝနဲ့ မဟာသမဿဘဝကို ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း မျှောလိုက်ရာမှာ စဏဿဍမုခိဘီလူးမက မျက်စိအလင်းရအောင် ကုပေးလို့ စကု၊ မျက်စိအလင်း စရရာ နေရာကို စလင်းလို့ ခှေါတယ်လို့ ရာဇဝင်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို စလင်းက ဧရာဝတီ မြစ်ညာမှာ ဖြစ်နေပြီး စကုက အောက်ရောက်နေတယ် မသိဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် သူတို့ကို မျှောလိုက်တာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဆန်တက်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ မျက်ကန်းနှစ်ယောက်က ဖောင်နဲ့ ဧရာဝတီကို ဆန်တက်ဖို့ ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစဿစ။ စကုနဲ့ စလင်း နေရာမှားပြီးများ အမည်ပေးထားသလားလို့ ရယ်စရာ တွေးမိသေးတယ်။ ဒီမြစ်တကြောကိုတော့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းက အကန်းတောင် သွားလို့ရတဲ့ ခရီးလို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
မကွေးကိုကျှောတော့ ယင်းချောင်းကိုဖြတ်ပြီး တောင်တွင်းကြီး နယ်ထဲကို ဝင်တယ်။ အဲဒီမှာ ခဏတာ နားပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီးမှာ ရှေးဟောင်းမြို့ရှိတယ်။ တနေ့နေ့တော့ လာလေ့လာမယ်လို့ တေးထားတယ်။ တောင်တွင်းကြီးကနေ အောင်လံသွားတဲ့ လမ်းမှာတော့ ဆရာမောင်ချောနွယ်ရဲ့ နာမည်ကျှော ဆတ်သွား ကို ဖြတ်ရပါတယ်။ ဆရာ့ကဗျာနဲ့တင် နာမည်ကျှောခဲ့တဲ့ မြို့ငယ်လေးလို့ ကျွန်တှော ထင်မိတယ်။ အောင်လံအထွက်မှာ ဘွက်ကြီးချောင်းကို ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ တံတားကြီး တစ်စင်းကို ကျှောရတယ်။ ပြည်ကိုရောက်တော့ မနက်၂နာရီကျှော ရှိနေပါပြီ။ ပြည်ကနေ ဒီဘက်က လမ်းကောင်းတာမို့ တစ်လမ်းလုံးလည်း မအိပ်ရသေးတာနဲ့ ငိုက်ခနဲ ဖြစ်သွားလိုက်တာ သတိရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အဝေးပြေးစခန်းကိုတောင် ရောက်လို့ နေပါပြီ။ မနက် ဂနာရီဗျား။
Posted by NLS at 4/22/2008 07:51:00 PM0comments Links to this post
Labels: Essay, Experience, Travel
ပုဂံ ဓာတ်ပုံအချို့ကို PICASA မှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ စိတ်တိုင်းတော့ သိပ်မကျပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မှန်ဘီလူး အမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ချင်ပေမယ့် ရှိနေတဲ့ မှန်ဘီလူးလေးတောင် မပြင်နိုင်သေးတာမို့ သူငယ်ချင်း ကျှောသီဟစိုးဆီက ငှားရိုက်လာရတာပါ။ လာရောက် ကြည့်ရှု အကြံပေးပါလို့ ဖိတ်ခှေါပါတယ်။
Posted by NLS at 4/20/2008 09:59:00 PM0comments Links to this post
ကမဿဘာကြီးကိုပြားသွားစေတဲ့ လူထုကွန်ယက် (Social Networking)
Social Networking ဆိုတာ ထင်ရှားကျယ်ပြန့်လာတဲ့ အင်တာနက် ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အင်တာနက်ပှေါမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စုဝေးဆက်သွယ်ရာ ဆုံရပ် နေရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ၊ လူနေမှု မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ လူတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးလာရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းကတည်းက အလုပ်စလုပ်လိုက်တာ ညနေမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့် အနားယူရတာမို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်၊ လွတ်လွပ်လပ်လပ် အနားယူချိန်၊ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး စာအုပ်သွားဖတ်ချိန် စတဲ့ အရာတွေမှာ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကဆို ကျွန်တှောတို့ တတွေမှာ တီးပါတီတွေ၊ ညစာစားပွဲတွေ၊ ပျှောပွဲရွှင်ပွဲတွေ စတဲ့ လူမှုရေး Social Welfare ကိစဿစလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်ကိုင်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အထက်ကလို အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မအားလပ် ကြတော့တာမို့ အခင်မင်ဆုံးဆိုတဲ့ တစ်မြို့ထဲနေ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့တောင် တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာ ချိန်းလို့ မရနိုင်အောင်ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှောတို့ဟာ အလုပ်တွေ အတွက်ပဲ အချိန်ပေး အာရုံစိုက်နေရပြီး လူမှုရေး ကိစဿစလေးတွေမှာတော့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာလာကြရတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ လူသားတွေရဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခု အနေနဲ့ Social Networking ဆိုတဲ့ အင်တာနက် ဆုံရပ်ကလေးတွေ ပှေါပေါက်လာခဲ့တာပါပဲ။
Social Networking တွေမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ တချို့က သီးခြား ကွန်ယက်လေး တစ်ခု အနေနဲ့ တည်ရှိတယ်။ တစ်ချို့က အဲဒီလို သီးခြားကွန်ယက်လေးတွေ အများကြီး ပေါင်းထားတဲ့ ကွန်ယက်ကြီး တစ်ခု အနေနဲ့ တည်ရှိတယ်။ တစ်ချို့က စီးပွားရေး ဆုံရပ်လေး တစ်ခုအနေနဲ့ တည်ရှိတယ်။ တစ်ချို့က ကြင်သူရှာတဲ့ နေရာလေး တစ်ခု အနေနဲ့ ရပ်တည်ကြတယ်။ တစ်ချို့က ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ရာ နေရာလေး ပုံစံအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ကြတယ်။
ပုံစံကတော့ ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်ရာ အဖွဲ့လေး အဖွဲ့လေးတွေအလိုက် စုဝေးကြပြီး၊ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ အဲဒီလို အဖွဲ့လေးတွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြီး ပိုကြီးမားတဲ့ ကွန်ယက်ကြီး တစ်ခုကို ဖန်တီးယူခြင်းပါပဲ။ လူသိများပြီး ကျယ်ပြန့် ထင်ရှားတဲ့ General Social Networking နေရာလေးတွေကတော့ MySpace၊ Facebook၊ Ning၊ Multiply စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီလူထုဆုံရပ်ကွန်ယက်ကြီးမှာ တွေ့ဆုံမှု သက်သက်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ လေးနက်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး စတာတွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Social Networking လို့ဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အင်တာနက်ပှေါမှာ ကူးလူးဆက်ဆံနေကြတာကို မြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပှေါမှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယား ဆိုရင် တစ်ကမဿဘာလုံးကလူတွေ အားလုံး ဝိုင်းပြီး ရေးနေကြတဲ့ အခမဲ့ စွယ်စုံကျမ်းကြီးတစ်ခုပါ။ ဘယ်သူကမှ ရေးပါလို့ မတိုက်တွန်း ရဘဲနဲ့ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေ အားလုံး ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို သူရေး ငါရေးနဲ့ ဝိုင်းရေးလိုက်ကြတာ အခုဆိုရင် အလွန်ကို ကျယ်ပြန့် ကြီးမားတဲ့ လူအများ မှီငြမ်းကိုးကားရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ Del.icio.us တို့ Digg တို့မှာ ဆိုရင်လည်း တကမဿဘာလုံးက ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ တွေ့ရှိမှု၊ သတင်း၊ အချက်အလက် အသစ်အဆန်းတွေကို ဒေသအသီးသီးက လူတွေက ဖြန့်ဝေပေးနေကြတာပါ။ Facebook, Myspace လိုနေရာမျိုးတွေမှာ ဟိုဘက် ကမဿဘာခြမ်းက တစ်ယောက်နဲ့ ဒီဘက် ကမဿဘာခြမ်းကတစ်ယောက် စာတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပို့ရင်း နယ်ကျှော ယဉ်ကျေးမှု ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာကြီးတွေ ဆုပ်ကိုင်ထားသူတွေကတော့ Social Networking ဆိုတာကို အနဿတရာယ်တစ်ခုလို့ မြင်ကြပါတယ်။ သူတို့က အထက်ကလို ဆက်ဆံမှုတွေကနေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ စာရိတဿတပျက်ပြားနိုင်တယ်၊ အချိန်ကုန်စေတယ်၊ လူငယ်ထုကို ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်မျိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို Globalization ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာနဲ့၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ တားဆီး ပိတ်ပင်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ သူတို့က ဘယ်လောက်ပဲ မကောင်းပါဘူးပြောပြော၊ လူငယ်တွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးပါစေ ဒီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ သိသာလွန်းတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကြောင့် တနေ့တခြား Social Networking ဆိုဒ်တွေဟာ ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
Social Networking လို့ ယေဘုယျ ပြောနေပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကဏဿဍအသီးသီး၊ ဝဘ်ဆိုဒ် အသီးသီးမှာ ကွဲပြားတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ၊ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပုံတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လို နေရာမျိုးမှာ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာကို လိုက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်တဲ့ နေရာကို ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့
စသည်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်က အင်တာနက်ပှေါမှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရချင်တယ်၊ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် ချင်တယ်ဆိုရင် ပထမ အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ ဒုတိယ တစ်ခုက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပိုပြီး Specific ဖြစ်တဲ့ နေရာဆိုပါတော့။ တတိယ တစ်ခုကတော့ Match.Com လို ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်တဲ့သူတွေကို ရှာတဲ့နေရာ၊ ကြင်ဖှောရှာတဲ့ နေရာမျိုးပါ။ စတုတဿထ တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ နေရာဆိုပါတော့။
ဒီ Social Networking Sites တွေကို ဒီခေတ်ရဲ့ Mediated Publics လို့ ခှေါကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လူတွေအားလုံး မီဒီယာ နည်းပညာနဲ့ ဒီနေရာကြီးမှာ တစုတဝေးတည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆုံစည်းနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာလဲဆိုတော့ အသင်းဝင်တွေ၊ အသုံးပြုသူတွေက Generate လုပ်တာဖြစ်တယ်။ အရင်ကဆို ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု လုပ်တဲ့အခါ ဒီဆိုဒ်တွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ကသာ အချက်အလက်တွေ၊ သတင်းတွေကို တင်ပေးတယ်။ တည်းဖြတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း Ideology ပြောင်းလဲလာပြီး Social Networking ဆိုဒ်တွေဟာ ယူဇာတွေကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်ပြီး ဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကြီးကို သူတို့ကိုပဲ မောင်းနှင်စေလိုက်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဒါကြီးကို တည်ထောင်ပေးသူ၊ ထိန်းသိမ်းပေးသူ အဖြစ်ပဲ ဆောင်ရွက်တော့တယ်။ ဒီအချက်လေးဟာ တကယ်ကို အပြောင်းအလဲကြီးမားစွာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Social Networking Site တွေရဲ့ မူလအစကိုတော့ Sixdegrees.Com ဆိုပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုထား ကြပါတယ်။ Sixdegrees.Com ကို ၁၉၉ရခုနှစ်မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယူဇာတွေကို ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပရိုဖိုင်းတွေ လုပ်ခွင့်ပြုတယ်၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ လိပ်စာစာရင်းတွေ လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဲဒါတွေကို ကြည့်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သူ့အရင်က အဲဒီလိုမျိုး ဒါတွေအားလုံးကို ပူးပေါင်းခဲ့သူ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် Sixdegrees.Com ကို Social Networking ရဲ့အစပထမလို့ သတ်မှတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီကုမဿပဏီဟာ အသုံးပြုသူ သန်းပေါင်းများစွာကို ရရှိပြီးကာမှ အခြားစီးပွားရေး အခက်အခဲတွေကြောင့် ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူဟာ အဲဒီခေတ်မှာ အားလုံးရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖြစ်ခဲ့တာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသာမက အခြားသော နည်းစနစ် အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ဖြည့်သွင်းပြီး ပေါင်းစပ်လာလိုက်ကြတာ ယနေ့ခေတ် Facebook၊ Myspace တို့လို အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ Network ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ လူတွေဟာ ဒီလို SNS တွေအပှေါမှာ အာရုံစိုက် ဖြန့်ကျက်လာကြသလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ Printed Media တွေပှေါက ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ စာရေးသူတွေလိုပဲ အွန်လိုင်း SNS တွေပှေါက Bloggerတွေ၊ ဖိုရမ်မာတွေ၊ သတင်းသမားတွေ၊ ပညာရှင်တွေမှာလည်း အမြဲစောင့်ကြည့် ဖတ်ရှုလေ့လာရတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အပြင်က စာရေးဆရာတွေမှာလိုပဲ အင်တာနက် စာရေးသူတွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ကမဿဘာနဲ့အဝှန်း ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီကွန်ယက်ကြီး အပှေါမှာက Printed Media တွေလို အကြာကြီး စောင့်စားနေစရာ မလိုဘဲ သူတို့ အခုရေး ကိုယ်က အခုဖတ် ချက်ချင်း ရသလို အဲဒီလိုမျိုး ရေးသားသူတွေကလည်း အများကြီး ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီရပ်ဝန်းကြီးဟာ ရေးသူနဲ့ ဖတ်သူကြားမှာ Interactive ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခုက အရင်ကဆို လူတွေဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်းထားတတ်ကြပေမယ့် အခုတော့ အင်တာနက်ပှေါမှာပါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်လာကြတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုပြီး ဆက်ဆံရ လွယ်ကူလာစေတယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခုက ဘယ်နေရာမှာ ဘာနည်းပညာ ရှိနေတယ်၊ ဘယ်အရာကို လိုချင်ရင် ဘယ်နေရာမှာ ရှာကြတယ်၊ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ဆက်သွယ်လို့ရမယ် ဆိုတဲ့ ရင်းမြစ် နေရာတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါဟာလည်း လွန်စွာမှ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ ကျွန်တှောတို့ဟာ ကတွတ်ပေါက်က ဗျိုင်းလို ထွက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကနေ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်နေရုံပါပဲ။ သူများတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို နားထောင်နေရုံပါပဲ။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ အတွက်လည်း တကမဿဘာလုံးက လူတွေနဲ့ သတင်းဖလှယ်ရင်း ရှာဖွေ ရယူနေရုံပါပဲ။ နောက်ဆုံး ဒီလိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကလေးဘဝကတည်းက ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မမျှောလင့်ပဲ တစ်နေရာရာမှာ ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက် ကြည်နူးကြမလဲ။ ကျယ်ပြောတဲ့ အပြင်လောကကြီးမှာက မမျှောလင့်ဘဲ ပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာက ဖြစ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါသေးတယ်။ Social Networking Sites တွေအပှေါမှာတော့ မဖြစ်နိုင်စရာဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကမဿဘာကြီးဟာ လုံးနေရာက ပြန်ပြားသွားပြီဆိုတဲ့ စကားပှေါလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
future more reading
Download this article as PDF| 450Kb | Fileden |
Posted by NLS at 4/20/2008 08:23:00 PM0comments Links to this post
Labels: Knowledge, PDF
ကျွန်တှော ဒီနေ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဝယ်လာတယ်။ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း စိတ်ဓာတ်တွေတောင် ကျလာတယ်။ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။ ရင်လည်းနာတယ်။ ရင်ထဲမှာတော့ ပြောချင်တာ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် မြိုသိပ်လိုက်တယ်။ မြိုသိပ်ရတာတွေလည်း ကျွန်တှောတို့ အတွက်တော့ နေသားတကျ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် အဲဒီလို မြိုသိပ်နေသူကိုမှ ထပ်တက်နင်းချင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လူတွေကိုတော့ ကျွန်တှော သိပ်မုန်းတယ်။ လောလောဆယ်တော့ NO အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်နေတယ်။ ရည်မွန်တို့ ရတနာလင်းတို့။ ကောင်းတယ်နှော။ ကျွန်တှော NO ကိုကြိုက်တယ်။ မပြုံးချင်ပေမယ့် ပြုံးလိုက်ပါတယ် :)
PS: တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နိုးသီချင်းလေး နားထောင်နေရင်း ဗေဒင်ဆရာကြီး ဘလော့ကို ရောက်သွားမိပြန်တော့ အယူတှောမဂဿငလာ ဦးနိုးရဲ့ နိုး ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးကို ဖတ်လိုက်ရပြန်ပေါ့ဗျား။ ကောင်းပါလေ့ ကောင်းပါလေ့။ ဒီအပြုံးလေးကတော့ ပြုံးချင်လို့ကို ပြုံးလိုက်တာ။ :)
Posted by NLS at 4/20/2008 08:06:00 PM0comments Links to this post
မဂဿငလာပါ။ သကြဿငန်ကာလတွင်းမှာ ဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှု အကြံပြု သွားကြသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ခွင့်၁ဝရက် ရတာမို့ မရောက်ဖြစ်တာ ၁ဝနှစ်ကျှောပြီဖြစ်တဲ့ ပုဂံကို လေ့လာရေး သွားပါတယ်။ အပူချိန် ၄ဝဒီဂရီ ကျှောကျှောလောက် နေပူထဲမှာ စက်ဘီတစ်စီးနဲ့ လှည်းလမ်းကြောင်းတွေ တလျောက်က ပုဂံဘုရားတွေထဲသွား နံရံဆေးရေးတွေ၊ ကျောက်စာတွေ၊ အဂဿငတေပန်းတွေကို ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရတာ အရမ်းပင်ပန်းပေမယ့် သွားရတာ တန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပုဂံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တှော့ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံလေးတွေ၊ လမ်းမှာ မြင်ခဲ့ရတာတွေ၊ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပှေါလာတဲ့ ဝိညာဉ်တွေ၊ ကျွန်တှော လုပ်ချင်တာတွေ၊ ဒါတွေကိုလည်း နောက်ပိုင်းမှာ ရေးသွားပါဦးမယ်။ ပိုက်ဆံကတော့ ကုန်လိုက်တာ သောက်သောက်လဲပါပဲ။ သကြဿငန်တွင်း သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေတာတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ စုတ်ပြတ်တာတွေကလည်း အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မပန်ဒိုရာ ဆုတောင်းပေးသလို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဘိုင်မပြတ်ပါစေနဲ့ ဆိုတာလေးကိုတောင် ဆုမတောင်း မိခဲ့တာ အခုမှ သတိရမိတယ်။ ခရီးစဉ်ဟာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ ကိစဿစအချို့ ရှိခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တှော့အတွက်တော့ ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်မိရုံနဲ့တင် အလွန်ပျှောရွှင်မိပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တှော တွေ့ရှိခဲ့တာလေးတွေကို ရေးနေတဲ့အပြင် အမေလူထုဒှေါအမာ အကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တှော့အမြင် ရေးနေပါသေးတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ဓာတ်ပုံတွေ ဝေမျှပေးတဲ့ အမေလူထုဒှေါအမာရဲ့မြေး ဘိုဘို ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမေ့လို အတဿထုပဿပတဿတိပုံစံမျိုး မရေးနိုင်ပေမယ့် စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ကနေ မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ပုံစံမျိုးလေး ရေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေသလို တင်ပေးသွားပါမယ်။
Posted by NLS at 4/19/2008 09:33:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/05/2008 08:16:00 PM0comments Links to this post
Sir Richard Carnac Temple ရဲ့ 37 Nats ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ နာမည်ကြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်က လန်ဒန်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နတ်သမိုင်း ရေးသားသူတွေ မှီးငြမ်းကြတဲ့ လက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို အပြင်မှာ ကှောပီ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ လိုချင်တာက စာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အထဲက ပုံတွေပါ။ ဒီပုံတွေကို Digitize လုပ်ချင်နေတာ တှောတှောကြာပါပြီ။ ဒါနဲ့ မူရင်းစာအုပ်ကို လိုက်ရှာမိတယ်။ မူရင်းစာအုပ်က အမဇုံမှာ ၄၇၅ ပေါင်လောက် ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ စပ်ဆက် ရာမှာ တွေ့ရတာတွေကလည်း ကှောပီတွေမို့ စိတ်တိုင်းမကျတာနဲ့ အင်တာနက်မှာ တက်ရှာတယ်။ တွေ့တယ်။ ၃ရမင်း မကဘူး။ အခြား ရှားပါး မြန်မာ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ရလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကြည့်ချင်ကြမှာပဲ။ ပုံတွေက အတန်သင့် ကြီးတယ် ဆိုပေမယ့် High Resolution တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေသုံးပြီး အကြီးချဲ့ သိမ်းဆည်းထားလိုက်တယ်။ နတ်ပုံတွေနဲ့ ရှေးမြန်မာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဝန်ကြီးမှူးကြီးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် ဟောဒီနေရာမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ (NYPL Digital Gallery) ကွန်နက်ရှင် မကောင်းရင်တော့ တက်တာကြာတတ်သလို တခါတလေ လုံးဝကို တက်မလာတတ်ဘူး။ ထူးထူးခြားခြား တန်ဖိုးရှိတာလေးတွေ တွေ့ခဲ့ကြရင်လည်း ကျွန်တှော့ကို လက်တို့ဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့ဦး။ :)
Website : NYPL Digital Gallery
Posted by NLS at 4/05/2008 04:23:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Myanmar, Photo
Posted by NLS at 4/05/2008 02:47:00 PM3comments Links to this post
Posted by NLS at 4/05/2008 01:53:00 PM0comments Links to this post
တကယ်တမ်း တနေ့တနေ့ ကျွန်တှော အင်တာနက် သုံးတဲ့အခါ တွေ့ရတာတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Tools လေးတွေ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ Applications တွေ အများကြီးပါ။ အခြား အင်တာနက်ကို အမြဲ မသုံးဖြစ်သူတွေ၊ သတိမထားလိုက် မိသူတွေကို ဝေငှပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော ပြောလိုက်တာနဲ့ သိစေချင်သူတွေ မသိသေးခင်၊ ပိတ်ချင်သူတွေက ပိတ်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်ထဲကသူတွေ အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိတာမို့ တှောတှောကို စဉ်းစားရပါတယ်။ အခုလည်း တစ်ခုတွေ့တယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့်ပြောရင် ပိတ်ခံရမှာ သေချာသလောက် ရှိတာမို့ စိတ်ထဲ မြိုသိပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုသာ မြန်မာတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးကြရင်၊ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေကလည်း ကူညီကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ တချိန်ချိန်ပေါ့။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာကို ကျွန်တှော သုံးလေးငါးခါ ရေးဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ဖွက်ထားလိုက်ဦးမယ်။ :)
Posted by NLS at 4/02/2008 09:54:00 PM0comments Links to this post
New blog updated on Myanmar Blog Directory 01. March, 2008
New blogs updated on Myanmar Blog Directory
01. March, 2008
Kyaw Thet Latt
Shwe Pyi Thu (General)
Dream World - အိပ်မက်ကမဿဘာ (General)
Ye Yint Nge - ရဲရင့်ငယ် (Personal)
Swan Bros (Personal)
Burmese Seaman - မြန်မာသဘေဿငာသားများ
Eastern Emotions (Art)
Nay Zaw Win Maung (Art)
Ashin Revata (Paauk) - အရှင်ရေဝတ (ဖားအောက်တောရ) (Dhamma)
K Pop Music
Phoe That (General)
Raw Mix (General)
My Blog - ကျွန်တှော၏ဘလော့ဂ် (General)
Posted by NLS at 4/01/2008 09:20:00 PM0comments Links to this post
Biography နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ပြောရရင် ပြန်ဆက်က စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး စာတည်းအဖွဲ့ကို ချီးကျူးဖို့ ကောင်းတယ်။ နှစ်ဆယ်ရာစု စာရေးဆရာများစာရင်း ၄တွဲ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သလို အခုလည်း ၂ဝရာစု စာဆိုစစ်သည်များဆိုပြီး စစ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အတဿထုပဿပတဿတိစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်။ စာဆိုစစ်သည်တွေ ဆိုပေမယ့် အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သခင်တင်မြတို့လို၊ မြသန်းစံ တို့လို ကျန်ခဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမရှိတာထက်စာရင် ဒီလိုမျိုးလေးတွေ ထုတ်ပေးတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ကိုကိုနိုင် (သုတေသီ -)(ရာမည -)
ခင်မောင်အေး (တကဿကသိုလ် -)
စိမ်းနောင်၊ မောင် (လယ်ဝေး)
ဆနဿဒ၊ မောင် (လယ်ဝေး)
တင်ခ (တကဿကသိုလ် -)
တာရာ (ဗိုလ် -)
ဘရှင် (ဗိုလ်မှူး -)
ဘုန်းကျှော (နတ်မောက် -)
ဘိုးထောင် (ယောနက -)
မြင့်လှိုင် (ပျဉ်းမနား -)
မင်းခေါင် (ဗိုလ် -)(ရွှေတူ)
မြတ်လေးနွယ် (ဒဂုန် -)
မှူးတင် (သိပဿပံ -)
ရန်နိုင်၊ ဖိုး (ကျောက်ကြီး)
လတ်၊ မောင် (ကမ်းရိုးတန်း)
လူနိုင် (တောသားကြီး -)
လှအောင် (ဗိုလ်မှူးကြီး -)(အငြိမ်းစား)
သက်နှင်း၊ မောင် (မ/ဥ)
သန်းတင် (ဗိုလ်မှူးချုပ် -)
ဉာဏ်မောင် (ဗိုလ် -)
နိုင်မိုး၊ မောင် (မြင်းမူ -)
ကျှောဝင်းမောင် (ဝမ်းအိုဝမ်း -)
ကျှောအောင် (မြင်းခြံ -)
နေဝင်း (တကဿကသိုလ် -)
မောင်မောင် (ဒေါက်တာ -)
မောင်မောင်ညို (ဒေါက်တာ -)
အောင်ဆန်း (ဗိုလ်ချုပ် -)
အောင်စေ (ဒေးဒရဲ -)
အောင်ဖေ (သခင် -)
အေးမောင် (ဗိုလ် -)
စာမူခွင့်ပြု - ၄၀၀ ၂၃၀၀ ၂၀၈
Posted by NLS at 4/01/2008 07:55:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/01/2008 07:43:00 PM0comments Links to this post